Sony TV vaovao 84-inch | Avy amin'ny Linux
Sony TV vaovao 84-inch
Orinasa elektronika mitarika Sony, efa nandefa a andalana vaovao amin'ny fahitalavitra goavambe, mahatratra ny 84 santimetatra. Ny teknolojia nampiharina tamin'ity tsipika vaovao mihoatra ny rehetra LCD TV misy hatreto.
Con Sony 4K ianao dia afaka mahazo vahaolana izay mitovy amin'ny mason'olombelona ary mankafy tsara Efijery 84 inch.
Este fahitalavitra Sony 4K vaovao Nalefa tany Arzantina izy io ary raha ny filazan'ny mpamolavola azy dia hanavao ny tsena ity haitao vaovao ity.
Mba hahazoana hevitra momba ny kalitaony, ity TV mahatratra 52 dpi (teboka isaky ny santimetatra) raha mahatratra 60 dpi ny mason'olombelona.
Sony 4K dia mampiasa teknolojia SimulView izay ahafahanao miditra amin'ny sary 2 samihafa amin'ny fahitalavitra iray ihany.
Mikasika ny feo, ny vokatra vaovao an'ny orinasa Japoney dia hanana rafitra herinaratra 50 W misy mpandahateny eo aloha. Amin'izany fomba itodihana any amin'ireo olona manoloana ilay fitaovana ny feo.
ny LCD TV ankehitriny ampiasain'izy ireo Teknolojia feno HD mitaky miala lavitra, fara fahakeliny, avo 3 heny ny haavon'ny monitor, raha misy ny fahitalavitra Sony 4K vaovao Hamela antsika hanana sary mazava raha toa ka apetraka lavitra dia lavitra ny mpijery.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » maro » Sony TV vaovao 84-inch
Ny mpanamboatra FSF hafa dia mikosoka sy ravina
RS (Lahatsoratra iray, momba ny tantara ratsy mety hiteraka tsy fahazoan-kevitra)